IPye Corner, i-Cotswold Manor w/ichibi elishisayo elingaphandle - I-Airbnb
IPye Corner, i-Cotswold Manor w/ichibi elishisayo elingaphandle
Worcestershire, England, i-United Kingdom
IPye Corner iyisithabathaba seBanga lesi-II esisohlwini lwezindlu zokulala eziyishumi zekhulu le-17 laseCotswold ezinezingadi ezisemthethweni, indawo yokubhukuda eshisayo engaphandle (Ephreli-Sept). Indlu ephelele yeholide yeqembu elikhulu, indlu ijwayelekile endaweni ngokuthinta ukuhlobisa kwase-Asia, okubonisa ifa lomnikazi. Ikhishi lokudlela elivulekile lihle kakhulu ekuphekeni ukudla okukhulu ngenkathi ujabulela ukubukwa kwengadi. Futhi kuwuhambo oluhle lwemizuzu eyisishiyagalombili ukuya edolobhaneni lase-Cotswold laseBroadway.
Indlu enkulu inamakamelo okulala ayi-8 futhi ilala ayi-16, inamagumbi okugezela ayi-6. Ifulethi linamagumbi okulala amabili futhi lilala amane, lineshawa/indlu yangasese. Sicela uqaphele iflethi lethu litholakala ngezindleko ezengeziwe zamaphawundi angama-200 ubusuku ngabunye.
Ukulungiswa okubanzi kwakamuva
- Amakamelo amahlanu okwamukela izivakashi
- Igumbi lebhulakufesi elisha ekhishini
- Igumbi lokudlela lihlala 20 elinendawo yomlilo ye-inglenook
- izishisi ezintsha zezinkuni ku-TV Snug kanye negumbi lokuhlala elisemthethweni
- Amahektha amabili ezivande ezibiyelwe ngezindonga nasesangweni
- Ichibi lokubhukuda elishisayo langaphandle lesizini (April-Sept)
- Ukuhamba imizuzu eyisishiyagalombili ukuya enkabeni ye-Broadway
- I-Sky & Apple TV ne-WiFi kuyo yonke indawo
- Amafulethi okulala amabili azimele, anomnyango ohlukile, atholakala njengenketho yezindleko ezengeziwe
Eholidini Lasebhange LangoMeyi / Isikhathi Sesigamu, sikaKhisimusi kanye Nonyaka Omusha futhi kusukela ngoLwesihlanu lokugcina ngoJuni kuya kowokugcina ngo-Agasti kukhona okungenani ubusuku obuyisikhombisa obuhlala noma isilinganiso.
Sicela uqaphele ukuthi uma samukela ukuhlala kwezimpelaviki ezimbili ebusuku kusukela ngoLwesihlanu kuya ngeSonto khona-ke isikhathi sokuphuma singo-12 emini, njengoba kuphakathi nesonto ukuhlala ubusuku obubili noma ngaphezulu ngaphandle kwalapho ukuphuma kungoLwesihlanu; uma isikhathi sokuphuma singu-10am ukuze sikwazi ukwamukela izihambeli zangezimpelaviki ezifika ngalo lolo suku. Ukuhlala kweviki isikhathi sokuphuma singo-10am. Amasonto amabili obusuku awatholakali lapho i-pool ivuliwe, ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba; ngakho-ke izimpelasonto zihlala ubusuku obuthathu noma isilinganiso.
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, I-Netflix, ikhebula ye-premium
ubusuku obungu-7 e- Worcestershire
Kunepaki enkulu ye-National Lottery exhaswa ngemali ye-Activity Park yezingane ezihamba ibanga lendlu ngemigwaqo yezinyawo enqamula amasimu; enokubukwa okufika ku-Broadway Tower. I-Broadway Tower ayiyona nje i-Georgian Folly - egqugquzelwe u-Capability Brown futhi yaklanywa u-James Wyatt futhi eyake yasetshenziswa 'njengekhaya leholide' abantu abafana noWilliam Morris, uDante Gabriel Rossetti kanye no-Edward Burne-Jones - kodwa futhi inendlu ehlala izikhali zenuzi.
Futhi i-Snowshill Manor, i-National Trust Property emangalisayo, ingaphezudlwana nje kwekhilomitha elilodwa ukusuka endlini; futhi kancane kancane kune-Cotswold Lavender. Isitolo esidayisa izinqolobane kanye negumbi letiye zivuliwe unyaka wonke kodwa isikhathi esingcono kakhulu sokuvakashela siphakathi kuka-9 Juni kuya ku-5 Agasti. Futhi i-Adam Henson's Cotswold Farm Park nayo ingamakhilomitha ayisikhombisa kuphela phansi komgwaqo.
Izitebele zamahhashi zikaJill Carenza azikho kude edolobhaneni lase-Stanton, kulabo abangajabulela ukugetshengwa banqamule amagquma ase-Cotswold noma izifundo zokugqoka ezisemthethweni. Kodwa uma uthanda okuthile okungakhandla kancane, ukwelapha okudayisa kuseduze nezitolo ezinhle ongaziphequlula maphakathi ne-Broadway; okuhlanganisa i-OKA, Cotswold Trading Company, Sue Parkinson kanye ne-Broadway Wine Company.
Hlola ezinye izinketho ezise- Worcestershire namaphethelo